Dingana amin'ny fananganana logiciel momba ny orinasanao - Victor Mochere
Ny rindrambaiko fandraharahana dia andiana programa informatika natao hampiasain'ny orinasa hanamora ny asa. Ny programa informatika dia manampy amin'ny fampitomboana sy fandrefesana ny vokatra. Ny rindrankajy fandraharahana dia natsangana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny orinasa manokana amin'ny fikambanana iray. Noho izany dia tsy azo afindra mora amin'ny tontolo ara-barotra hafa izy io. Mitranga izany raha toa ka mitovy ny tontolo iainana amin'ny asa.
Noho ny fepetra tsy manam-paharoa, dia tsy azo inoana fa ny rindrambaiko tsy misy dikany dia hamaly ny filanao. Miaraka amin'ny fanatsarana ara-teknolojia, ny vahaolana rindrambaiko vaovao dia ampidirina matetika mba hampandehanana ny asa fandraharahana. Noho izany antony izany dia zava-dehibe ny fisafidiananao fonosana mifanaraka amin'ny filan'ny orinasanao. Tsy maintsy miantoka ihany koa ianao fa tafiditra ao anatin'ny teti-bolanao izany. Ny rindrambaiko Business dia mitantana asa maro ao anatin'izany:
Mikarakara ny asa fitantanana
Mitsitsy ny fotoana sy ny asa ary ny fandaniana
Manatsara ny fahombiazany sy ny fahamarinany
Misoroka ny fahadisoana amin'ny asa
Fanaraha-maso ny fivoaran'ny orinasa
Mampiasa ny tsingerin'ny fiainan'ny fivoaran'ny lozisialy ny mpamorona hamolavola, hamolavola ary hizaha toetra ny rindrambaiko. Ny dingana tsirairay amin'ny Software Development Life Cycle (SDLC) dia tapa-kevitra amin'ny modelin'ny fizotran'ny rindrambaiko. Ny SDLC dia mikarakara ny famokarana rindrambaiko avo lenta izay mahafeno ny andrasan'ny indostria. Ny fomba SDLC dia manohana ny famolavolana ny rindrambaiko. Tsy maintsy manohana ny fikojakojana ny logiciel ny fomba fiasa voahevitra tsara. Ny dingana tsirairay dia miteraka vokatra ilaina amin'ny fampiharana ny dingana amin'ny tsingerin'ny fiainan'ny rindrambaiko.
Adika amin'ny endrika tonga lafatra avy eo ireo fepetra takina. Ny dingana fitsapana dia iray amin'ireo dingana manan-danja ao amin'ny SDLC. Izany dia satria raha misy zavatra tsy mety amin'ity dingana ity dia mety hitarika amin'ny famerimberenana ny fizotran'ny kaody manontolo izany. Ny fananana lozisialy automatique fitsapana tsara indrindra dia miantoka fa vita avokoa ny karazany rehetra amin'ny fitiliana miasa. Ny fitsapana sy ny dingana hafa rehetra ao amin'ny SDLC dia noforonin'ny ekipa fampandrosoana. Tsy misy dingana azo atao raha tsy misy ny hafa. Ireto manaraka ireto ny dingana amin'ny fananganana logiciel momba ny orinasanao.
1. Fantaro ny olan'ny fandraharahana hovahana
2. Fandinihana saina sy drafitra
3. Ny fepetra sy ny famakafakana azo atao
4. Famolavolana sy fanaovana prototype
5. Famolavolana rindrambaiko sy fanodinana
6. Fampidirana sy fitsapana
7. Fampiharana sy fametrahana
8. Fampandehanana sy fikojakojana
Ny logiciel dia afaka mamaha ny fanamby iainana amin'ny asa fandraharahana. Manampy amin'ny fikarakarana ireto manaraka ireto izany:
Mampitombo ny fahombiazany
Fanaraha-maso sy fitantanana ny fitahirizana
Fanampiana ny sehatra fandraharahana
Manampy ny mpikambana ao amin'ny ekipa eny an-kianja
Fandaminana ny fifandirana eo amin'ny toeram-piasana
Mba hamoronana rindrambaiko mahomby dia mila mamantatra izay mametra ny vokatrao ianao. Aorian'ny famantarana dia afaka manomboka mitady fomba hamahana ireo olana ianao.
Dingana iray manan-danja amin'ny fizotry ny SDLC ny fikirakirana saina. Eto, ny tolo-kevitra rehetra dia tsy maintsy jerena alohan'ny fankatoavana. Mandritra ny drafitra dia tsy maintsy manombana ny fepetran'ny tetikasa ny mpitantana ny tetikasa. Tafiditra ao anatin'izany ny kajy ny vola lany amin'ny asa sy ny fitaovana. Tafiditra ao anatin'izany ihany koa ny famoronana tetiandro miaraka amin'ny tanjona kendrena sy ny rafitry ny fitarihana. Tafiditra ao anatin'ity dingana ity ihany koa ny fampidirana ny hevitra avy amin'ireo mpandray anjara.
Ny mpandray anjara dia mety ahitana mpamorona, mpanjifa mety, manam-pahaizana momba ny lohahevitra, ary solontenan'ny varotra. Ny mpitantana ny tetikasa dia tsy maintsy miantoka ny hamaritana ny sehatra sy ny tanjon'ny rindrambaiko. Izany dia satria mamolavola ny lalana sy ny fepetran'ny ekipa hamolavola ny rindrambaiko. Izy io dia mametraka fetra izay manakana ny tetikasa tsy hiala amin'ny tanjony voalohany.
Ao anatin'io dingana io no hamaritana amin'ny antsipiriany ny tetikasa. Ny tompon'andraikitra amin'ny tetikasa dia afaka manombana ny maha-mety ny tetikasa. Ny fitantanana ny fitakiana dia afaka mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fitaovana fiaraha-miasa toy ny Atlassian confluence. Ireo fitaovana ireo dia manampy amin'ny fanoratana fepetra nefa tsy manao izany amin'ny tanana amin'ny processeur teny. Eto ianao dia mamaritra ny tokony hataon'ny fampiharana sy ny fepetra takiana. Ohatra, ny rindrambaiko media sosialy dia mila manana fahafahana mifandray amin'ny hafa.
Mety mila endri-pikarohana ny programa fanisana. Ao anatin'ny fepetra takiana dia mety mila mamaritra ny loharano ilaina amin'ny fampivoarana ny tetikasa ianao. Azonao atao, ohatra, ny mamorona logiciel hifehezana milina fanamboarana mahazatra. Amin'ity tranga ity, ny milina dia tokony ho fepetra. Ny famakafakana azo atao dia mamaritra ny anton-javatra ara-teknika sy ara-bola izay misy fiantraikany amin'ny fampivoarana rindrambaiko. Ny anton-javatra toy ny loharanon-karena sy ny fandraisan'anjaran'ny ekipa dia manampy amin'ny kajy ny fiverenan'ny fampiasam-bola.
Dingana iray tena manan-danja amin'ny fizotran'ny fampivoarana rindrambaiko izany. Ao anatin'io dingana io no mifanandrify amin'ny fepetra manokana momba ny tetikasa ny maritrano rindrambaiko. Ny injeniera amin'ny fampiharana dia mamolavola fampiharana manokana manaraka ny fenitra napetraka. Tafiditra ao anatin'izany ny famolavolana vokatra voafaritra sy ny rafitra sy ny famolavolana angona. Ny firafitry ny tetikasa dia noforonina mandritra ity dingana ity. Anisan'izany ny prototype farany izay hampiasaina amin'ny dingana manaraka amin'ny fampandrosoana.
Amin'ny maha-ampahany amin'ny dingan'ny famolavolana azy, ny prototype dia toy ny dika voalohan'ny rindrambaiko. Famantarana ny fomba fijery sy fiasan'ny vokatra farany izany. Ny prototype dia azo aseho amin'ny mpandray anjara ary ny valin-tenin'izy ireo dia ampiasaina hanatsarana ny rindrambaiko. Tsarovy fa tsy dia lafo loatra ny manao fanovana mandritra ny dingana fanaovana prototype. Raha ampitahaina amin'ny fanoratana kaody hanaovana fanovana amin'ny dingana fampandrosoana.
Ity dingana ity no fototry ny tsingerin'ny fiainan'ny fampandrosoana rindrambaiko manontolo. Tafiditra ao anatin'izany ny famokarana kaody sy ny fandikana ny antontan-taratasim-pamolavolana ho amin'ny fampiharana rindrambaiko tena izy. Ny ekipa dia tsy maintsy miantoka fa ny kaody dia mifanaraka amin'ny mari-pamantarana rindrambaiko. Ny mpitantana ny tetikasa dia tsy maintsy miantoka ihany koa fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpandray anjara ny fepetra takiana. Raha vita tsara ny dingana teo aloha, dia hahafeno ny fepetra takian'ny tetikasa ny rindrambaiko.
Ity dingana ity dia ahitana ny fitiliana sy ny fampidirana rafitra. Manomboka izany rehefa vita ny fanamboarana sy vita ny fampiharana. Mety tsy hitovy izany arakaraka ny fomba fitiliana automatique ampiasaina. Ny injeniera fitsapana automatique dia mampiasa rafitra fitsapana mandeha ho azy miaraka amin'ny fampidirana mitohy. Izany dia natao mba hanatanterahana ny fitsapana unit, fanangonana automatique ary fitsapana. Mba hahazoana antoka fa madio ny kaody, ny injeniera fitsapana automatique dia tsy maintsy manao fitiliana automatique. Zava-dehibe ny fanamarinana satria manampy amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ny rindrambaiko. Manomboka ny dingana fampiharana rehefa azo antoka fa tsy misy bibikely ilay rindrambaiko.
Mandritra io dingana io no ametrahana ny vokatra. Ny dingana eto dia tanterahina araka ny paikady fampiharana. Ny lozisialy novolavolaina sy voasedra dia afindra amin'ny famokarana. Fiovana manokana ihany no avoaka amin'ny famoahana misesy. Mifototra amin'ny mety ho fahasarotana amin'ny tetikasa na ny tsy fahampian'izany, dia mety ho famotsorana tsotra na mitongilana izany. Aorian'ny famoahana azy, ny mpampiasa farany dia mahazo fahafahana hitsapa ny rindranasa rindrambaiko vita. Ny automatique dia manome ny mpitantana ny fahafahana mamindra ny fampiharana eo anelanelan'ny fitsapana sy ny famokarana. Izany dia manampy amin'ny fametrahana azo averina sy azo antoka mandritra ny tsingerin'ny fandefasana fampiharana.
Ny fikojakojana sy ny fanavaozana misesy dia atao mandritra ny dingana farany amin'ny fampandrosoana. Ny fiheverana manokana dia omena amin'ity dingana ity satria ny fampiharana dia tsy maintsy havaozina sy namboarina tsara. Ao anatin'io dingana io no hamafisina ny endrik'ilay fampiharana. Havaozina ihany koa ny zava-bitany ary atao ny fanitsiana mifototra amin'ny tamberina. Ny fahaiza-manao vaovao dia azo ampiana mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpampiasa.
Ny tsingerin'ny fiainan'ny fampivoarana rindrambaiko dia mampiseho amin'ny mpitantana ny fampandrosoana ny zava-mitranga. Asehony azy ireo ihany koa ny toerana azo hatsaraina ny fizotran’ny fampandrosoana. Tahaka ny fizotran'ny raharaham-barotra rehetra, ny SDLC dia mifantoka amin'ny fanatsarana ny fizotran'ny famoronana fampiharana. Izy io dia mampivelatra fomba fijery azo ekena amin'ny tetikasa manomboka amin'ny fanodinana isan'andro, mankany amin'ny fitantanana ny fandaharam-potoana famokarana.
Cyber ​​​​security sy casinos an-tserasera